China Mutengo unodhura China Intelligent Venlo Hollow Glass Kura Matende Kits / Greenhouse Yekurima Hydroponics-PMV001 fekitari uye bhizimisi | Aixiang
1-Chiedza chekutumira chinopfuura 90%.
2-Iyo ine yakanyanya kupisa yekuputira kuita, inonyanya kukodzera kune zvimwe zvigadzirwa zvinoda kupisa kwekushisa uye zvine kukosha kwakanyanya.
3-Greenhouse iri neazvino uye novel apperance, yakagadzikana chimiro.
4-Inogona kuramba inorema uye yakasimba chando / mhepo, uye zviri nyore kwazvo kuchenesa nekuchengetedza.
5-Iyo nguva yehupenyu yegreenhouse main body inopfuura makumi maviri emakore.
Nezve AX Girazi Greenhouse
Sezvo isu tese tichiziva, Venlo greenhouse yakatanga kuoneka muNetherlands.
AX Greenhouse iri kugara ichidzidza pasi rese sezvo ichikura.
Naizvozvo, muna 2005, takatanga kudzidzira iyo Venlo greenhouse muChina, nyika ine nharaunda dzakasiyana siyana.
Takavaka dzimba dzekuchengetera zvinhu muTibet, inotonhora uye ine sinou, muXinjiang, iyo inopisa uye isina mvura, uye takavaka dzimba dzekuchengetera munzvimbo dzakanyorovera uye dzakasviba dzemahombekombe.
Naizvozvo, isu takaunganidza yakawanda data mune anopfuura makore gumi. Dhata nezve iyo inotakura data yegreenhouse nemiti.
Pashure: Wholesale OEM / ODM China Hemp Maruva Cbd Kudyara Greenhouses Poly Carbonate PC Sheet Greenhouse yeHemp Kudyara Canada USA-PBSV001
Zvadaro: Zvichangosvika Kusvika China Julong Nyore Yakaiswa Blackout Plastic Firimu Greenhouse Inoshandiswa Kutengesa
Yese Girazi Greenhouse
China Girazi Greenhouse
Girazi Hwindo Greenhouse
Glasshouse Uye Greenhouse
Kwakakurudzira Steel furemu Multi Span Pe Film Green ...
Trending Zvigadzirwa China Yakakwira Transmittance Venl ...
Professional gadzira For China Venlo Type T ...
Factory Wholesale Mutengo China Zvekurima Produ ...
Makambani Ekugadzira eChina Easy Installa ...